Momba anay - Jiangsu Excalibur Power Machinery Co., Ltd.
Fanamarihana & Voninahitra
Fanaraha-maso sy fiantohana kalitao
Mangina Diesel Generator
Lasantsy Water Pump
Solitany Water Pump
Paompy rano maloto amin'ny diesel
Paompy fanerena avo
Surface vita Screed
Fanasan-tseranana avo lenta
Power Tiller & Mpamboly
Kojakoja sy kojakoja
Fitaovana Fitaovana Masinina
Fantsom-panafody momba ny paompy
Ireo milina maivana amin'ny fanamboaran-jiro
CERTIFICATE & HONORA
TAOM- ANARANA SOURCE
2018 Orinasa mandroso amin'ny fanavaozana teknolojia Faritra fampandrosoana ara-toekarena an'ny Komitin'ny Kaomina Xinghua
2017 Orinasa teknolojia avo lenta Departemantan'ny siansa sy teknolojia any amin'ny faritany Jiangsu
Sampan-draharaha ara-bola any amin'ny faritany Jiangsu
2016 Orinasa teknolojia tsy miankina Fikambanan'ny orinasa teknolojia tsy miankina Jiangsu
CERTIFICATE MANAGEMENT ENTERPRISE
2016 CERTIFICATE SYSTEMA fitantanana ny kalitao IAF, CNAS
2015 CERTIFICATE OF CONFORMITY SGS
2014 Fanamafisana ny fanarahana- CE ENTE CERTIFICAZIONE MACCHINE LTD.
2020 Fiorenan'ny fifandraisana matanjaka an'ny mpamokatra diesel Biraon'ny Fananan-tsaina any Sina
2019 Generator diesel mora mivory conveyor Biraon'ny Fananan-tsaina any Sina
2018 Miorena fatotra mateza ho an'ny mpamokatra gazoala Biraon'ny Fananan-tsaina any Sina
2017 Seza fanosorana tsy miovaova ho an'ny mpamokatra gazoala Biraon'ny Fananan-tsaina any Sina
2016 Fitaovana mihodina radiatera ho an'ny mpamokatra gazoala Biraon'ny Fananan-tsaina any Sina
FANALAHANA AVY ALIBABA
2013 Cutad-Edge Awad ho an'ny varotra manerantany E-commerce Alibaba.com
Ny tombony azo amin'ny milina fanapahana laser dia ny fahafaha-mihetsika, ny fametrahana mazava tsara, ny famerimberenana, ny hafainganana, ny fahombiazan'ny vidiny, ny kalitao tsara ary ny fanapahana tsy misy fifandraisana.
Excalibur dia nanambola milina fanapahana laser roa mba hahazoana antoka fa marina sy mamokatra ny vokatra Excalibur. Miaraka amin'ny fanampian'ny milina fanapahana laser, Excalibur dia afaka manatanteraka ny takian'ny OEM mpanjifa amin'ny fampidirana logo ao amin'ny vokatray.
Tetezamita avy amin'ny "novokarin'i Excalibur" ka hatramin'ny "novokarina tamin'ny faharanitan-tsaina
Excalibur dia nanasa andalana roa ho an'ny fivoriambe rojom-bovoka mandeha ho azy, izay manana fahaiza-manao amin'ny famokarana motera 1250 isaky ny andalana isan'andro. Ny toerana manan-danja ihany koa dia hotontosain'ny robot, izay afaka mampihena ny lesoka ateraky ny mpiasa. Ary amin'ny alàlan'ny rafitra ERP, afaka mitantana sy manara-maso ny atrikasa, famokarana, mpiasa, kalitao, fitaovana ary tontolo iainana isika handroahana ny famokarana Excalibur, ny fahombiazany.
Masinina manamboatra robot
Ny welder robotic dia afaka mahazo kalitao avo lenta amin'ny alàlan'ny fiantohana ny hafainganam-pandehan'ny welding, ny zoro ary ny halaviranana amin'ny alàlan'ny (+ 0,04mm). Ny fiantohana fa ny tadin-tsolika tsirairay dia vokarina hatrany amin'ny kalitao avo lenta indrindra mampihena ny filàna fanamboarana lafo.
Miaraka amin'ny fanampian'ny Robot Welding Machines, Excalibur dia mitombo be ny famokarana, ka miantoka ny ora fanaterana. Tsy ny Excalibur ihany no manome toky ny ora fandefasana azy fa ny kalitaon'ny vokatra azo antoka koa.
Fifehezana QUALITY SY GARANY
Niezaka hatrany i Excalibur ho toy ny teny filamatra "Sincerity First, Quality Foremost" ho an'ny mpanjifa tsirairay
Fitaovana, toy ny fitsapana mafy, mikrôometra, mpiantso ary fitaovana hitsambikinana hitsapana ny boribory sy ny fahasarotan'ny tany.
Ny Excalibur dia mitaky ny fizahana ireo kojakoja rehetra alohan'ny hidirana ao amin'ny trano fanatobiana entana. Izahay dia manana mpanara-maso ny kojakoja manerantany, ary ny mpanara-maso ho an'ny faritra kely manokana.
Fitsapana ny kalitaon'ny fivoriambe
Excalibur dia mitaky fanandramana fanombohana isaky ny vokatra, hijerena raha misy olana amin'ny fiangonana. Izahay dia manamarina ny hafainganana sy ny maripana ary ny tabataba ihany koa. Raha tsy maninona ny zava-drehetra dia halefanay any amin'ny fonosana.
Ny injenieran'ny Excalibur dia miandraikitra ny kalitaon'ny fivoriambe . Izy ireo dia hitahiry ny firaketana ny fizotrany sy ny valiny.
Amin'ny maha orinasa anay dia hanohana anao foana izahay miaraka amin'ireo teknolojia ho an'ny vokatra rehetra.
Raha misy tranga fiantohana mitranga dia hiverina aminao izahay miaraka amin'ny vahaolana ao anatin'ny 24 ora.
Ho an'ny olana goavana, na dia kely aza ny fahafaha-manao, dia handefa ny teknisianinay any ivelany izahay hanampy amin'ny famahana ny olana.
Ny kojakoja rehetra, ao anatin'ny vanim-potoana fiantohana anay, dia maimaim-poana.
Raha mihoatra ny vanim-potoana fiantohana dia afaka manome ihany koa ireo kojakoja fanampiny ho an'ny vokatray rehetra.
Amin'ny alàlan'ny fihainoana anao sy ny fahazoana tsy tapaka isaky ny dingana amin'ny tetikasanao, ny ekipa mpivarotra sy ny fanampiana ara-teknika dia manoro hevitra anao ary manampy sanda tena ilaina.
Lalan'i Chuanghui, faritra indostrian'ny tontolon'ny Lincoln, Xinghua Ctiy, faritanin'i Jiangsu, PRChina
© Copyright - 2010-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra asongadina- Tags mafana- Sitemap.xml